आखिर म को हो तिम्रो ? - Pradesh Today आखिर म को हो तिम्रो ? - Pradesh Today
सायद त्यसप्रकारको परिकल्पना वा अनुभव गर्ने अवसर कमैले पाउँछन् होला । जहाँ अनेकौं जन्जिर, बन्धन अनि असमान अवस्थाको बाबजुत कसैको मायामा रमाउन पाउछन् त्यो पनि एकोहोरो । । यो स्वार्थी दुनियाँमा चोखो अनि पवित्र मायाको मुल्य नै कहाँ छ र यहाँ ?
यहाँ केवल बिकाउ, आकर्षण क्षणिक प्रेमको बहाना मात्रै गरिन्छ । हुन पनि हो मानवीयता हराउँदै गएको दुनियाँमा कसैको भलो चाहने, प्रगति चाहने मान्छेहरूको संख्या औलामा गन्न सकिएला ।
पवित्र प्रेमको खडेरीमा खै कहाँबाट चोखो र पवित्र प्रेमको वर्षात् हुन्छ कहिलेकाहिँ र कसै–कसैलाई यो संसारमा जसलाई हुन्छ ऊ अवश्य खुसी हुन्छ । न त कुनै पूर्व निर्धारित योजना, स्वार्थ, न त केही पाउँछु भन्ने चाहना न त गुमाउनुको चिन्ता नै तै पनि यति समर्पण किन गरिरहेछु म ?
आफैले आफूलाई प्रश्न गर्छु । सायद, यो सवालको जवाफ कुनै साथीबाट अपेक्षा गरे भने ‘यो त माया हो यार लव प¥यो’ भन्ला हुन पनि यो भन्दा फरक उत्तरको आशा पनि म कसरी गर्नु सक्छु र ? ऊ पनि अरूभन्दा फरक मान्छे कहाँ हो र ?
यहाँसम्मको जीवनको यात्रामा, मेरो परिस्थितिले कहाँ यसलाई सहजै यो अनुभूति अनि चाहना भन्न मिल्यो र ? यो त सरासर गलत सावित हुन्छ । किनकी हाम्रो समाजमा यस किसिमको परिस्थितिमा कहाँ आफ्नो अनुभूतिहरू भावनाहरू सहजै अरूसँग कहाँ साट्न पाउँछ र ?
या अरूलाई सुनाउन पाइन्छ ? त्यो त समाजको रितिथितिको विरूद्ध र परिवारप्रति घाट गरेको सावित भैहाल्छ नि । अद्यपि किन किन मनमा एक किसिमको अनौथो परिकल्पना आइरहन्छ चाहना रहिरहन्छ ।
समाजको कडा जन्जिर, नियम र कानुनको बाबजुद पनि किन–किन एउटा मिठो गल्ती गर्दै गरेको अनुभव भैरहेको छ मलाई । यो मिठासपूर्ण गल्ती दोहो¥याइरहन मन लाग्छ निरन्तर–निरन्तर । बिडम्वना यो मिठो गल्तीलाई मैले प्रेमको नामले न्वारान गर्न मलाई न त कुनै अधिकार छ न त कसैले इजाजत नै दिएको छ या भनौं यो समाज र मेरो परिस्थितिले नै स्वीकारोक्ती देला ।
शुरूवाती हरेक कुराको सामीप्यता, परिचय सामान्य चिनजानबाट नै हुन्छ । उनको साथको शुरूवाती पनि यो भन्दा फरक पक्कै थिएन जो अरूसँग पनि हुन्छ । फरक यति मात्र हो कोही दुई चार दिनको हाई हल्लोमा सीमित हुन्छन् अनि हराएर जान्छन् भने कोही नजिकको खास साथी बन्छ अनि साथीभन्दा पनि माथि पुग्छ सधै सधैको लागि । अनि यी साथीले मनमा अनेकौं ज्वारभाटा ल्याउँछन् उठलपुठल गराउँछन् ।
त्यस्तै बनेको थियो उनको र मेरो सम्बन्ध पनि । सायद यो सम्बन्ध पनि त्यस्तै भयो मेरो लागि अनि सम्भवत उनको पनि । उनको अनुभूतिको कुरा गर्न मलाई इजाजत त छैन तर मलाई जुन अनुभव हुन्छ त्यो मेरो कल्पनाको राजकुमारी उनलाई पनि हुन्छ होला भन्नेमा विश्वस्त छु ।
आफ्नो त कल्पनामा हराउने र अनि रमाउने त्यस्तो मिठो लत भइसक्यो । मानौं एक माछालाई पानीको लत भए जसरी । अब त किन किन मेरो यी नयनले उनलाई पछ्याइरहन थालेको छ । कस्तो अनौंठो चाहना भनौं या हाम्रो साथित्वको सम्वन्ध साथी भनौं भने त्यो भन्दा माथि छौं ।
प्रेम भनौं भने न प्रेमको कुनै औपचारिकता छ । तर पनि अनौठो चाहना छ अनौठो एउटा अभ्यास छ कि उनीसँग हरेक पल–पल अद्यावधिक हुनुपर्ने मौसम विभागको सूचना जस्तो । कहिलेकाहिँ त अनावश्यक कुराको डाहा हुन्छ मनमा कसैको बारेमा कुरा गर्दा नि डाहा लाग्ने मानौं की आफ्नै प्रेमिका नै हो जस्तो ।
हुन् पनि उनको साथमा यति मिठास छ कि सुगरको बिरामीले पनि त्यो मिठासको स्वाद लिने चाहनामा आफ्नो स्वास्थ्य जोखिममा राख्न तयार हुन्छ । त्यस्तो कि हरेक बिहानीको शुरूवात उनको गुड मर्निङ्गबाट शुरू हुनुपर्ने अचेल अनि हरेक रात्रीको अन्त्य उनको गुड नाइटबाट हुनुपर्ने ।
ह्याव नाइस डेदेखि स्वीट ड्रिमसम्म उनको उनको शब्दमा रमाउन मन लाग्ने । कस्तो लत होला मानौं ड्रग एडिक्ट नै भए जस्तो ।
मेरो एकजना भाइले फेसबुकको स्टाटस्मा लेखेको थियो कुनै बेला ‘सुगर खाईयो मिठाई खाइयो सुत्नेबेला आफ्नो स्वीट ड्रिम कहिले आएन भनेर’ मैले पनि स्वीट ड्रिमको खातिर सुगर अनि मिठाई खाएकै हो स्वीट ड्रिम कहिले आएको थिएन ।
तर जब उनीसँगको सामीप्यताले स्वीट ड्रिमको खातिर कहिले सुगर अनि स्वीट खानु परेन । त्यसपछि मलाई लाग्यो त्यसको लागि त सुगर अनि मिठाई होइन अनुभूति अनि महसुस गर्नुपर्ने रहेछ, जुनकुरा कसैले जबरजस्त गर्न सक्दैन ।
मेरो अनुभूतिमा किन यति जबरजस्त स्फुर्ति या इर्नजी छ अचेल मानौं हरेक खेलाडीले खेल जित्नपर्ने बाध्यता जस्तो, हरेक विद्यार्थीलाई परीक्षामा पास हुनैपर्ने बाध्यताजस्तो । वर्षौदेखि बदल्न नसकेका केही बानीहरू एकाएक बदलिएको छ अचेल, वर्षौदेखि निरन्तरता दिन नसकेका केही जरूरी कार्य नियमित भएको छ अचेल । मानौं कि खडेरी लागेको जमिनमा एकाएक वर्षा भएर मुल फुटेर हराभरा भएजस्तो । विस्तारामा ढलेको बिरामी एकाएक टंग्रिएर उठेजस्तो ।
मलाई जान्न मन छ आखिर के खासियत छ यो मेरो अनुभूतिमा या के दैविय शक्ति उनको सामीप्यतामा या कुनै सुपर पावर ? जे सुकै भएता पनि यो अनौठो अनुभूतिले सकरात्मक उर्जा भने पक्कै थपेको छ जीवनमा । कहिलेकाहिँ एक्लै–एक्लै मुस्कुराउँछु, अनि गुनगुनाउँछु ।
हरेक कुराहरू सहजै सेयर गर्छु मानौ कि अब हामीभन्दा यो संसारमा अरू कोही छैन जस्तो । कहिलेकाहिँ यति टाढा लैजान मन लाग्छ कि जहाँ कसैको नजर नहोस्, कसैले भेट्न नसकोस् ।
मलाई पनि सँगै लैजाउ है जहाँ गए पनि भन्ने उनको भनाईमा के छ के छ म निष्कर्ष निकाल्न सकिरहेको छैन । तर जे भएपनि अचेल जीवन रंगीन लाग्छ मलाई जीउनुको वास्तविक आनन्दको रस्वादन गर्दैछु परिकल्पनामा भए पनि ।
मलाई थाहा छैन मेरो स्थान कहाँ छ ? उनलाई पनि मलाई जस्तै अनुभूति हुन्छ या हुँदैन ? थाहा छैन उनलाई पीडा हुँदा मलाई दुखेको जस्तो अनुभव हुन्छ कि हुँदैन ? थाहा छैन उनको सानो खुसीमा म आफ्नै खुसी सम्झेर रमाएको जस्तो हुन्छ कि हुँदैन ?
तर म भने हरेक पल–पल उनको सुख अनि दुःखमा रमाएको छु । यति त मलाई विश्वास छ उनलाई मेरो यादहरू पक्कै आउँछ होला र त मलाई यस किसिमको अनुभूति हुन्छ ।
ति यादहरू जो सँगै बसेर लामो यात्रा गरेको, ति याद सँगै बसेर कफी खाएको, ति याद जो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सँगै बिताएका याद अनि सामाजिक सञ्जाल म्यासेन्जरमा गरेका मिठा, रमाइला, अनि ठट्यौली कुराहरूको याद त अवश्य जीवनभर नै बिर्सन नसकिने छन् ।
म आफैलाई प्रश्न गर्छु किन म मा यस्तो बदलाव आइरहेको छ ? के म साँच्चै यस्तो नै हो त ? आखिर यो सब हुनुमा कसको दोष छ ? अनि फेरी भन्छु दोषी त म आफै हो जो गन्तव्य हिन यात्रातिर प्रस्थान गरे गन्तव्य हिन यात्रु जस्तो जसको गन्तव्य कहाँ हो थाहा छैन ।
म मा यति बदलाव आउनुमा उनको कुनै दोष छैन पनि उनी निर्दोष नै छिन् सायद । दोषी छ त केबल यो अदृश्य यो मेरो मन जो निश्चित सीमानाभन्दा पर गएर रमाउन खोज्यो । यही दोषी मन जो निलो गगनमा स्वतन्त्र एकपंक्षी भएर उड््न खोज्यो अनि समुन्द्रको गराईमा दुब्न खोज्यो ।
उनको दोष थियो त केवल सुन्दर, सुशील अनि प्रिय हुनु । उनी वास्तविक रूपमा सुन्दर लाग्छ मलाई । हरेक रचनाकारलाई आफ्नो रचना प्यारो लागेजस्तो । हरेक पे्रमीलाई आफ्नो प्रेमिका प्यारो लागे जस्तो । यो लेखाईमा उनको सुन्दरताको बयान नगरू भने अधुरो अपूरो लाग्ला, गरू भने उनको वास्तविक सुन्दरतामा न्याय गर्न सक्छु या सक्दिन डर पनि लागिरहेको छ ।
फेरी सोंचे मेरो अनुभूति हो मेरो दृष्टीकोण न हो । मैले जे अनुभूति गरे त्यो त मैले गर्नै पर्छ । कुनै कुचिकारले फुर्सदमा बनाएको मूर्तिजस्तो स्केलले नापी–नापी बनाएको चित्रजस्तो मिलेको वदन, कालो रङको मृग नयनी ठूला–ठूला आँखा कालो लामो परेली केश । झट्ट हेर्दा प्यासी अनि सेक्सी लाग्ने ।
उनको हेराइमा पृथकता छ साँच्चै गहिरिएर हेरिरह्यो भने निलो सागरमा दुब्दै–दुब्दै गएजस्तो अनुभूति हुन्छ । उनको आखाँमा ऐश्र्वयता छ भन्दा फरक नपर्ला यतिमात्र हो की कालो र खैरोको ।
मैले सुनेको लोभी मान्छेको अगाडी उनी आँखालाई झुक्काएर हिड्छिन अरे क्रेजी भएर एकोहोरो भएर हेर्न थाल्छन् अरे मान्छेहरू ।
उनको ओठको संरचना पनि केही कमको लाग्दैन जो हेर्दा च्वाप्प म्वाई खाइदेउ जस्तो लाग्ने गाला पनि उस्तै हिमाली भेगमा फलेको मौसमी स्याउ जस्तो । मुस्कुराउँदा झन् उत्तिकै राम्री । प्राय नारीका ओठहरू लिपिष्टकको साहारामा सुन्दर देखिन्छन् तर उनको ओठ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर लाग्छन् मलाई ।
हल्का–हल्का कर्ली केश भएर पनि चट्ट मिलाएर कोर्दा अनि बाटेको भन्दा खुल्ला छोडेको अनि साइडमा पानबुट्टे काँटा या फूल राखेर सजाउँदा त उनको सुन्दरताले सीमा नाघ्छ मानौं कि वर्षायाममा कोशीको बाँध फुटे जस्तो, एक सय डिग्रीको तापक्रम पछि पानी उम्लेको जस्तो । अझ उनको आँखाले गाजल पाउँदा पूर्णता पाउछ फक्रेको फूल जस्तो ।
कहिलेकाहिँ मेरो आँगनमा फुलेको गुलाफको फूललाई नियाल्दै भन्छु, ‘ए गुलाफ तिमी यति सुन्दर किन छौं थाहा छ ? गुलाफले मुस्कुराउँदै भन्छ नाई थाहा छैन । अनि मैले भन्छु यो सुन्दरता त तिमीले उनीबाटै चोरेको हो नि ! अनि गुलाफ पनि लज्जित हुँदै सरी भन्छ ।
एकदिन बाटोमा हिड्दै गर्दा कोइलीको मधुरतापूर्ण आवाज सुन्दै थिए अनि सोध्न मन लाग्यो ‘ए कोइली तिमी कसरी यति मिठो आवाज निकाल्छौं भन त ? कोइलीले घमण्ड गर्दै भन्यो यो त मेरै आवाज हो आफै निस्कन्छ ।
मैले भने ए लाटी कोइली त्यति घमण्ड पनि नगर अनि नढाँट यो सुमधुर आवाज त तिमीले उनीबाटै सिकेको होइना र ? अनि कोइली पनि लजाएर सरी भन्दै उडेर जान्छ । उनको सुन्दर मुहारको अगाडी पूर्णिमाको जुन पनि लाजले बादलको घुम्टो बनाई ओढेर लुकेर बस्छिन् अचेल । अब यो भन्दा पनि बढी भने स्वर्गका परीहरू पनि डाहा गर्लान् फेरी ।
सायद यि मेरा नयनका दृष्टीहरू पनि हरियाली पाएर होला हेराई बदलिन थालेको छ यति सुन्दर देख्न थालेको छ । सबैलाई हरेक मान्छेको अनुहारमा उनको आकृति देख्न थालेको छ ।
म्युजिक भिडियोमा भएका मोडलहरू, नायिकाहरूको चेहेरा पनि उनकै जस्तो लाग्न थालेको छ अचेल । प्रत्येक गीतमा लेखिएका प्रत्येक शब्द मेरै कथा समावेश गरिएर लेखिए जस्तो अनि मेरै लागि गाएको जस्तो ।
यादका लागि बहाना नभएका कुनै क्षण छैनन् । वर्षा, बादल, सितल हावा, रमाइला पल, दुःखका पलसँगै घुम्न गएका रमाइला ठाउँहरू, छोटो या लामो यात्रा, कार्यक्रममा सँगै सहभागी भएका पलहरू, सँगै बसेर कफि पिएका पल या खाजा खाएका पल हरेक बिहानीदेखि रात्रीकालिन प्रहरसम्म उनको यादहरू नआउने कुनै क्षण छैन किनकी ति हरेक पलहरू मेरो मानसपटलमा अविष्मणीय क्षण बनेर बसेका छन् ।
यद्यपि यि सबै कुरा एउटा प्रेमी र प्रेमिकाको बीचमा हुन्छ तर म त उनको प्रेमिका पनि त होइन । तैपनि किन यति बिघ्न चाहना ? यति जबरजस्त परिकल्पना किन ? यति बिघ्न सामीप्यता किन ? म आफैमा यति धेरै बदलाव किन ? प्रश्न गर्छु आफैलाई । उनको सामीप्यताले सबैलाई विर्सन थालेको छु अचेल । मानौं कि मेरा हरेक आवश्यकता र चाहना उनबाटै पूरा हुन्छ जस्तो ।
मानौ कि अब म उनकै लागि बाँचिरहेको छु जस्तो । मेरो अब अरू कुनै अरू लक्ष्य र उद्देश्य छैन जस्तो । परिकल्पनामा म यति पर पुगी सकेको हुन्छु कि फर्कदा बाटो नै विर्सन्छु कि भन्ने डर पो लाग्छ अचेल । फेरी आफैलाई नियाल्छु अनि भन्छु ओइ त किन यति भावनामा डुबेको ?
को होस् त उनको ? यो प्रश्नले मलाई झस्काउँछ । मैले यो सामीप्यताबाट एउटा कुरा पक्कै सिकेको छु । हरेक कुराको नीति नियम बन्धन भएता पनि यो स्वतन्त्र कल्पनामा बहकिने मनको कुनै निश्चित सीमाना छैन । कुनै बन्धन छैन, नीति नियम र कानुन छैन, यो बहकिने मनको लागि स्टाटस पनि मिल्नुपर्ने रहेनछ । त्यही भएर अचेल प्रेम र भावनाको परिभाषा मैले आफ्नै बनाएको छु।
प्रेमको दायरा फराकिलो बनाएको छु । अनि कहिलेकाहिँ मिठो गल्ती गरेर नयाँ नियमको चल्ती चलाउन मन लाग्छ । मैले केही पृथक गर्न मन लाग्छ । उनलाई खुलेर माया गर्न मन लाग्छ । यो मेरो छाती चिरेर उनलाई गर्ने माया सारा दुनियाँलाई देखाउन मन लाग्छ । यो मुटुको धड्कन साँच्चै उनको लागि धड्किएको भनेर प्रमाणित गर्न मन लाग्छ ।
किनकी विगतका मायाका परिभाषा, मूल्य मान्यता, सिद्धान्त, विधि प्रक्रियाभन्दा पृथक भएर प्रेमको अनुभूति जो गरिरहेको छु सायद एकोहोरो । एकाउण्टको डेविड एण्ड क्रेडिट जस्तो नहुने रहेछ माया र यो अनुभूति ।
विडम्वना अन्तिममा फेरी उही प्रश्न दोहोरिन्छ अनि उनीसँग प्रश्न गर्न मन लाग्छ आखिर म को हो तिम्रो ? यही प्रश्नको उत्तरको पखाईमा निरन्तर अनन्तसम्म पर्खिरहनेछु यो अन्त्यहीन, सीमाहिन बहकिने मनको अन्तरकुण्ठीत प्रश्न सँगसँगै …?
भ्रमण बर्ष २०२० र कृषि पर्यटन